The Rohingya News Bank : ICOE
Showing posts with label ICOE. Show all posts
New York Times and Fortify Rights may have endangered Rohingya justice initiatives by trumpeting captured Myanmar soldiers' testimony
Arakan Army soldiers on the march at an undisclosed location in Myanmar's Rakhine state. Image: Facebook
BANGKOK – As long-anticipated international accountability measures for Myanmar gather pace, recent developments which at first seem to promise evidence for justice, on closer examination could potentially disrupt such investigations.
On September 8, the American nongovernmental organization Fortify Rights releasedastatement, in conjunction with the New York Times, of testimony by two Myanmar Army, or Tatmadaw, soldiers who claim to have perpetrated under military orders the murder of Rohingya Muslims in Rakhine state in 2017.
Labels: 2020, AA, en, ICC, ICJ, ICOE, Myanmar, Rohingya.Article, UN
မောင်နုရွာနဲ့ ချွတ်ပြင်ရွာ သတ်ဖြတ်မှု ICOE အစီရင်ခံစာ ဖော်ပြချက် တပ်မတော်ခုံရုံး စစ်ဆေးမယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ICOE အစီရင် ခံစာထဲမှာ အစုအပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ မောင်နုရွာနဲ့ ချွတ်ပြင်ရွာသတ်ဖြတ် မှုတွေကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးခုံရုံး (Court of Inquiry) နဲ့ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ စစ်တပ်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, ICOE, mm, စစ်ခုံရုံး, စစ်တေးမည်, ဗွီအိုအေ
Aung San Suu Kyi writes that the voice of victims 'must be heard' but investigators must also be 'vigilant in their search for truth' © Yves Herman/Reuters
Labels: 2020, Article, DASSK, en, Financial Times, ICOE, Myanmar, War Crime
ICJ ကိစ္စ တပ်မတော်စိုးရိမ်မှုမရှိ၊ အစိုးရညွှန်ကြားချက် အတိုင်း လိုက်နာမည်
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အိုင်စီဂျေကြားဖြတ်အမိန့်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မနေဘဲ၊ အစိုးရရဲ့ ညွှန်ကြား ချက် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဒုတိယစစ်ဥပဒေချုပ်ဗိုလ်ချုပ် သောင်းနိုင် က ဒီကနေ့ နေ ပြည်တော်မှာ လုပ်တဲ့ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, ICJ, ICOE, mm, RFA Burmese, တပ်မတော်, သတင်း, သတင်းစာရှင်းလင်း
Young Rohingya refugees look on asageneral view of Balukhali refugee camp is pictured in Ukhia on November 16, 2018. (AFP Photo)
Labels: 2020, en, FRC, Genocide, ICOE, Myanmar, Nay San Lwin, News
ရခိုင် အာဆာတိုက်ခိုက်မှု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ဘယ်လို အရေးယူနိုင်သလဲ
ရှေ့နေချုပ်ရုံးက စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အကူအညီနဲ့စစ်နိုင်တယ်လို့ဆို
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အာဆာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပဋိပက္ခတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်(ICOE) ရဲ့ အပြီးသတ်အစီရင်ခံစာပါ အကြံပြုချက်တွေနဲ့အညီ စုံစမ်းစစ်ဆေး၊တရားစွဲဆိုဖို့ ဆောင်ရွက်မယ်လို့ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2020, ARSA, ICC, ICOE, mm, တိုက်ခိုက်မှု, ဘီဘီစီ မြန်မာ, သတင်း, ဆောင်းပါး
ဒါပေမယ့် အခုလို တပ်မတော် စစ်ခုံရုံးက စစ်ဆေးမှု လုပ်နေဆဲ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ဂူတာပြင် လူသတ်ခံရမှု မှာတော့ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိဘူးလို့ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က ပြောပါတယ်။
Labels: 2020, ARSA, ICOE, mm, စုံစမ်းရေးယူမည်, တပ်မတော်, ဗွီအိုအေ, သတင်း
A Rohingya refugee reacts while holding his dead son after crossing the Naf river from Myanmar into Bangladesh on October 9, 2017, about two months after operations by the Myanmar military began.
YANGON - A Myanmar-appointed panel concluded Monday that some soldiers likely committed war crimes against its Rohingya Muslim community but the military was not guilty of genocide, findings swiftly condemned by rights groups.
Labels: 2020, BROUK, en, Genocide, ICOE, Rohingya, Tun Khin, War Crime
Myanmar’s leader Aung San Suu Kyi, right, shakes hands with Philippine diplomat Rosario Manalo,amember of the Independent Commission of Enquiry for Rakhine State, at the Presidential Palace in Naypyitaw, Myanmar, Monday, Jan. 20, 2020. An independent commission established ... more >
NAYPYITAW, Myanmar (AP) - An independent commission established by Myanmar’s government has concluded there are reasons to believe that security forces committed war crimes in counterinsurgency operations that led more than 700,000 Rohingya Muslims to flee to neighboring Bangladesh.
Labels: 2020, en, ICOE, Myanmar, News, Rakhine, War Crime
Myanmar's leader Aung San Suu Kyi meeting Philippine diplomat Rosario Manalo,amember of the Independent Commission of Enquiry for Rakhine State, at the Presidential Palace in Naypyitaw. Myanmar's president on Tuesday (Jan 21) called for soldiers to be prosecuted for killing Rohingya civilians duringa2017 military campaign that forced more than 730,000 of the minority to flee to Bangladesh. - AP
Labels: 2020, en, ICOE, Nay San Lwin, Rakhine State, RFC, Rohingya, Rosario Manalo